Fanavotana ny tontolo iainana...
Simba ny tontolo iaina, ndao hiray hina hanambatra ny hery hamerina ny fihavanana. hasehontsika ny fitiavan-tanindrazana amin'ny alalan'ny fihetsika ataontsika isan'andro, satria i Madagasikara dia tsy LOVA navelan'ny razana ho antsika fotsiny fa indramintsika amin'ny taranaka aza, mba hirehareha ny taranaka hoe "mandova tsara"...
Ny nahaterahan'ny Mpamonjy
25 desambra — Ankalazaina amin'ity andro ity ny nahaterahan'i Jesoa, Ilay Zanak'Andriamanitra, Mpamonjy izao tontolo izao. Ny Evanjelin'ny Masindahy Matio sy Lioka no mitantara io fahaterahan'ny Tompo io. Araka ny voalazan'ny Soratra Masina dia i Maria, zanak'i Anne sy i Joachim avy ao Nazareth sy Galilée no renin'i Jesoa. Ary i Joseph, taranak'i Davida no nitaiza azy. Fofombadin'i Maria i Joseph.
Pejy 9 amin'ny 108